अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय / AstraZeneca - Covid-19 खोप लिनुहोस्
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले बनाएको COVID-19 खोपलाई ब्रिटिश विज्ञानको लागि विजयको रूपमा स्वागत गरिएको छ।
ब्रिट्सले game जनवरी २०२१ मा "खेल परिवर्तन गर्ने" जाब प्राप्त गर्न सुरु गर्यो - २०२१ भरि लाखौं खोपहरूको आशा गरियो। खोप मुख्यतया बेलायतमा उत्पादन भइरहेको छ, यद्यपि यूरोप भरिका अन्य साइटहरू प्रयोगशालाको पहिलो डोज निर्माण गर्न प्रयोग भइरहेको छ।
भाइरल भेक्टर (आनुवांशिक रूपमा परिमार्जित भाइरस)
नियमित फ्रिज तापमान
December० डिसेम्बर २०२०
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय / AstraZeneca खोप लिदा शरीरमा कसरी काम गर्दछ?
भाइरल भेक्टर (आनुवांशिक रूपमा परिमार्जित भाइरस)।
COVID-19 भाइरसले यसको बाहिरी सतहमा प्रोटिनहरू प्रयोग गर्दछ, स्पाइक प्रोटीन भनिन्छ, शरीरको कोशिकामा प्रवेश गर्न र रोग सार्न।
यो खोप अर्को भाइरस (एडेनोभायरस परिवारको) बाट बनेको छ जुन सार्स-कोभ -२ (COVID-१)) स्पाइक प्रोटीन (भाइरसको अंश हो जसले यसलाई मानव कोशिकामा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ) बनाउन जीन समावेश गर्न परिमार्जन गरिएको छ। )। एडेनोभाइरस आफैले प्रजनन गर्न सक्दैन र रोग पैदा गर्दैन।
एक पटक यो दिइइसकेपछि खोपले सार्स-कोभ -२ जीन शरीरमा कोषहरू दिन्छ। कोषहरूले जीनको प्रयोग स्पाइक प्रोटीन उत्पादन गर्दछ। व्यक्तिको प्रतिरक्षा प्रणालीले यस स्पाइक प्रोटीनलाई विदेशीको रूपमा व्यवहार गर्दछ र प्रोटिनको विरूद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षाहरू - एन्टिबडीहरू र टी सेलहरू उत्पादन गर्दछ।
यदि पछि, खोपिएको व्यक्ति SARS-CoV-2 को सम्पर्कमा आए, प्रतिरक्षा प्रणाली भाइरस चिन्न र यसलाई आक्रमण गर्न तयार हुनेछ: एन्टिबडी र टी कोषहरू सँगै मिलेर भाइरसलाई मार्न सक्छन्, शरीरमा प्रवेश गर्न रोक्न सक्छन्। कोषहरू र संक्रमित कोषहरूलाई नष्ट, यसैले COVID-19 को बिरूद्ध रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय / एस्ट्राजेनेका खोपका तत्त्वहरू के हुन्?
एक खुराक (०. m मिलि) ले समावेश गर्दछ: COVID-१ V भ्याक्सिन (ChAdOx1-S * पुनः संयोजक) × × १० ^ १० भाइरल कणहरू।
* पुनः संयोजक, प्रतिकृति-कम चिम्पान्जी एडेनोभायरस भेक्टर ईन्कोडिंग सार्स कोभ २ स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। आनुवंशिक रूपले परिमार्जित मानव भ्रूण किडनी (HEK) २3cells कोशिकामा उत्पादन गरियो।
यस उत्पादले आनुवंशिक रूपले परिमार्जित जीवहरू (GMOs) समावेश गर्दछ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय / एस्ट्राजेनेका खोप कसरी चलाइन्छ?
खोप केवल एक सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल वातावरणमा मानिसहरूलाई दिइएको छ एलर्जी प्रतिक्रियाको उपचार गर्ने सुविधाहरूसँगै तिनीहरू भएमा। अरु कसैबाट खोप नलिनू। यदि कसै द्वारा प्रस्ताव गरिएको हो, र तपाईलाई शंका छ भने, तपाईको जीपी संग सम्पर्क राख्नुहोस्।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी / एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन एक मांसपेशीमा इन्जेक्सन गरिन्छ (सामान्यतया माथिल्लो बाहुमा)।
तपाईले २ ईजेक्शन प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंलाई भनिन्छ जब तपाईंलाई दोस्रो इन्जेक्सनको लागि फर्कनु पर्छ।
खोप कोर्समा प्रत्येकको ०.ml मिलीलीटरको दुई अलग खुराक हुन्छ। दोस्रो खुराक पहिलो खुराक पछि and र १२ हप्ता बीचमा प्रशासित हुनुपर्दछ।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी / एस्ट्राजेनेका खोपको पहिलो डोज प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले उही खोपको साथ खोप कोर्स पूरा गर्नु पर्ने सिफारिस गरिन्छ।
खोपको प्रत्येक इंजेक्शनको बखत र पछाडि, तपाईंको डाक्टर, फार्मासिस्ट वा नर्सले तपाईंलाई एलर्जी प्रतिक्रियाको संकेतहरूको लागि अनुगमन गर्न १ around मिनेट जति हेर्नेछ।
के त्यहाँ कुनै सम्भावित जोखिमहरू र / वा ओक्सफोर्ड युनिभर्सिटी / एस्ट्राजेनेका खोपका साइड इफेक्टहरू छन्?
औषधीमा कुनै पनि कुरा जोखिमबिना आउँदैन - कुनै चीज हामी सोचे बिना नै लिन्छौं, प्यारासिटामोल जस्तो गरी, जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
सबै औषधिहरू जस्ता, यो खोपले साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, यद्यपि सबैलाई हुँदैन। खोपको साथ क्लिनिकल अध्ययनहरूमा, प्रायः साइड इफेक्टहरू हल्का देखि मध्यम प्रकृतिमा थिए र केही दिन भित्र समाधान भयो केही खोपको केही हप्ता पछि पनि।
यदि साइड इफेक्टहरू जस्तै दुखाइ र / वा ज्वरो समस्याग्रस्त छ, प्यारासिटामोल युक्त औषधी लिन सकिन्छ। तर जहिले पनि पहिले डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
साइड इफेक्ट समावेश गर्न सक्छन्:
धेरै साधारण (१० जनामा १ भन्दा बढीलाई असर गर्न सक्छ)
चिसो वा ज्वरो महसुस
सामान्यतया अस्वस्थ महसुस
मांसपेशी दुख्ने र जोड़ दुख्ने
जहाँ इंजेक्शन दिइन्छ
चोट लाग्ने ठाउँ जहाँ इन्जेक्सन दिइन्छ
साधारण (१० मध्ये १ जनालाई असर गर्न सक्छ)
फ्लू जस्तो लक्षणहरू जस्तै उच्च तापक्रम, घाँटी दुखाइ, बहेको नाक, खोकी र सर्दी
इंजेक्शन साइटमा एक गांठ
Uncommon (१०० जनामा १ जनालाई असर गर्न सक्छ)
विस्तारित लिम्फ नोडहरू
अत्यधिक पसिना, खुजली छाला वा दाटहरू
क्लिनिकल परीक्षणहरूमा त्यहाँ धेरै दुर्लभ रिपोर्टहरू थिए जुन स्नायु प्रणालीको ईन्फ्लेमेसनसँग सम्बन्धित थिए, जसले सुन्न, पिन र सियोहरू, र / वा भावना गुमाउन सक्छ। यद्यपि यो घटना खोपका कारण भएको हो भनेर पुष्टि हुन सकेन।
यदि तपाइँले यहाँ उल्लेख नगरिएका कुनै साइड इफेक्टहरू देख्नुभयो भने, कृपया तपाइँको डाक्टर, फार्मासिष्ट वा नर्सलाई सूचित गर्नुहोस्।
चेतावनी र सावधानीहरू
तपाइँलाई यो खोप दिइनु अघि तपाइँको डाक्टर, फार्मासिष्ट वा नर्सहरूसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाइँ:
यदि तपाईंसँग कुनै गम्भीर एलर्जीको प्रतिक्रिया छ भने (anaphylaxis) कुनै पनि अन्य खोप इंजेक्शन पछि।
यदि तपाईंसँग हाल उच्च तापमान (38 38 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी) को साथ गम्भीर संक्रमण छ। यद्यपि हल्का ज्वरो वा संक्रमण, चिसो जस्तै खोपका लागि ढिलाइ गर्नु पर्ने कारणहरू होइनन्।
यदि तपाईलाई रक्तस्राव वा चोट लाग्ने समस्या छ, वा यदि तपाई रगत पातलो पार्ने औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ (एंटीकोआगुलेन्ट)।
यदि तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली ठीकसँग काम गर्दैन भने (इम्युनोडेफिशियन्सी) वा तपाईं प्रतिरोध प्रणाली कमजोर पार्ने औषधीहरू लिइरहनु भएको छ (जस्तै उच्च-खुराक कोर्टीकोस्टेरोइड्स, इम्युनोसप्रेसिसन वा क्यान्सर औषधिहरू)।
यदि खोप लिनुहुन्न भने
तपाईंसँग कुनै पनि सक्रिय पदार्थ वा अन्य कुनै पनि घटकमा गम्भीर एलर्जीको प्रतिक्रिया भएको छ। एलर्जी प्रतिक्रियाको लक्षणमा छालाको खुजली दाग, सासको दुखाइ र अनुहार वा जिब्रोको सूजन समावेश हुन सक्छ। तपाईंको डाक्टर वा हेल्थकेयर प्रोफेशनललाई तुरून्त सम्पर्क गर्नुहोस् वा तत्काल नजिकको अस्पताल आपतकालीन विभागमा जानुहोस् यदि तपाईंलाई एलर्जीको प्रतिक्रिया छ भने। यो जीवन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि माथिको कुनै पनि तपाइँलाई लागु हुन्छ भने, तपाइँ खोप दिनु अघि डाक्टर, फार्मासिष्ट वा नर्ससँग कुरा गर्नुहोस्।
कुनै पनि खोपको रूपमा, यस खोपले यसलाई पूर्ण रूपमा रक्षा गर्न सक्दैन यो प्राप्त गर्ने सबैलाई।
कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरूमा वा हाल प्रतिरोध प्रतिक्रियालाई दबाउन वा रोक्ने पुरानो उपचार लिइरहेका व्यक्तिहरूमा हाल कुनै डाटा उपलब्ध छैन।